पराजित भएपनि कञ्चनपुरको विकासमा लागिरहने रमेश लेखकको प्रतिक्रिया
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, कञ्चनपुर । प्रदेश नम्बर ७ मा राजनैतिक हिसाबले महत्वका रुपमा मानिने कञ्चनपुरमा तीनओटै निर्वाचन क्षेत्रबाट वामकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रत्यक्षतर्फ बैतडीमा १२ हजारभन्दा बढी मत बदर हुनुको दोषी को ?
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, बैतडी । मंसिर १० गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको छ । ... बाँकी अंश»
सुनसरी ३ को चुनावः भगवतीले हार्ने डरले मतगणना हुन दिइनन् – गच्छदार
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, सुनसरी । सुनसरी क्षेत्र नं ३ को मतगणना अझै शुरू हुन सकेन । सोमबार राति मतगणना सुचारू गर्ने बिषयमा भएको छलफलबाट केही सहमति नबनेपछि मतगणना शुरू हुन नसकेको हो । ... बाँकी अंश»
फरार सुचीका रेशम चौधरी बने सांसद
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, कैलाली । प्रहरीको फरार सुचीमा रहेका रेशमकुमार चौधरी सांसद बनेका छन् । ... बाँकी अंश»
कम्युनिष्ट गठबन्धनले किल्ला गाड्यो अर्घाखाँचीमा
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, सन्धीखर्क । अर्घाखाँचीमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका तीन वटै क्षेत्रमा कम्युनिष्ट गठबन्धनका उम्मेद्वारहरुले फराकिलो मताअन्तरले विजयी हासिल गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
निर्वाचन खारेजी अभियानमा लागेका आरोपी थपलियासहित आठ पत्रकार रिहा
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको निर्वाचन खारेजी अभियानमा लागेको आरोपमा पक्राउ परेका पत्रकार तथा प्रगतिवादी साहित्यकार खेम थपलियासहित आठ पत्रकार सोमबार रिहा भएका छन् । ... बाँकी अंश»
कञ्चनपुरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अन्तिम परिणाम, रमेश लेखक २५८ मतले पराजित
२०७४ मङ्सिर २६ मंगलबार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुर जिल्लाको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । ... बाँकी अंश»
विजय जुलुसमा प्रचण्डले भने– ‘चितवनका जनतामाथि घात गर्दिन’
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं चितवन ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पुष्पकमल दाहालले चितवनका जनतामाथि कहीँ कतैबाट घात नगर्ने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
डडेल्धुराको समानुपातिकमा एमाले र माओवादीको जोड्दा पनि काँग्रेसको वढी
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, काठमाडौं । मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदश्य निर्वाचनमा डडेल्धुरा जिल्लाको समानुपातिक निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको छ । ... बाँकी अंश»
विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र समान हैसियतमा
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बराबरी हैसियतमा पुगेको छ । ... बाँकी अंश»
एमालेको चेतावनी : 'सरकारका हरेक निर्णय उल्टाईन्छ'
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले अहिलेको कामचलाउ सरकारले गरेको काम अब बन्ने सरकारले निरन्तरता नदिने भन्दै राजनीतिक ... बाँकी अंश»
काभ्रे १ ‘ख’ र २ ‘क’ मा एमाले विजयी
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘ख’ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (एमाले) का चन्द्र लामा विजयी भएका छन् । ... बाँकी अंश»
सिरहा १ बाट प्रदिप गिरि विजयी
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, सिरहा । सिरहा क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका प्रदिप गिरि विजयी भएका छन् । गिरिले २३ हजार ९५१ मत प्राप्त गरी विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका गंगाप्रसाद यादवले २१ हजार ३७१ मत प्राप्त गरे। ... बाँकी अंश»
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, काठमाडौँ । मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना कार्य जारी छ । ... बाँकी अंश»
पर्सा २ र ३ मा फोरम नेपाल विजयी
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, पर्सा । पर्सा क्षेत्र नं २ र ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । क्षेत्र नं २ बाट फोरम नेपालका विमलप्रसाद श्रीवास्तव र क्षेत्र नं ३ बाट हरिनाराणप्रसाद साह रौनियार विजयी भएका हुन । ... बाँकी अंश»
जित्यो नेमकिपाले पनि
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, नगरकोट । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ को प्रदेश ‘क’ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका हरिशरण लामिछाने विजयी भएका छन् । उनी १२ हजार ७८९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । ... बाँकी अंश»
रमेश रिजाललाई हराउँदै लक्ष्मणलाल कर्ण बिजयी
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, पर्सा । पर्सा क्षेत्र नं ४ को प्रतिनिधि सभामा राजपाका लक्षमणलाल कर्ण बिजयी भएका छन् । ... बाँकी अंश»
चीनकाजीको हारमा को कति दोषी ? कसको अन्तर्घात ?
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, गोरखा । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठले निर्वाचनमा पराजय भोग्ने नियती सायदै देखेका थिए । त्यसैले त उनी उत्साहपूर्वक गोरखा क्षेत्र नं १ मा चुनावी प्रचारमा लागेका थिए । ... बाँकी अंश»
डा नारायण खड्का जीतनजिक
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, उदयपुर । नेपाली काँग्रेसका नेता डा नारायण खड्का प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय नजिक पुगेका छन् । ... बाँकी अंश»
कञ्चनपुरमा धामीको जादू, साउँद निराश
२०७४ मङ्सिर २५ सोमबार, भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार तथा नेकपा एमालेका नरबहादुर धामी निर्वाचित भएका छन् । ... बाँकी अंश»